ကိုယ်အင်တာနက်ဘယ်လောက်သုံးသလဲဆိုတာကို ပြန်တွက်နိုင်မယ့် Application ၅ ခု – MyTech Myanmar
ကိုယ်အင်တာနက်ဘယ်လောက်သုံးသလဲဆိုတာကို ပြန်တွက်နိုင်မယ့် Application ၅ ခု
အခုအချိန်မှာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေနဲ့ အင်တာနက်သုံးရတာ ယခင်ကလိုမဟုတ်တော့ပဲ လွယ်ကူလာပြီဆိုပေမယ့်လည်း ဖုန်းအော်ပရေတာတွေရဲ့ မျိုးစုံနေတဲ့အင်တာနက်အစီအစဉ်တွေကြောင့် ကိုယ်တရက်ကို အင်တာနက်ဘယ်လောက်သုံးနေသလဲဆိုတာကို တွက်ချက်ဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အခုပြောပြသွားမယ့် Application ၅ ခုက သင့်အတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
My Data Manager ကတော့ တရက်သုံးခဲ့သမျှ Data တွေကို တနေရာထဲမှာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး App တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ WiFi နဲ့ Mobile Data ကို ခွဲခြားပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ App ကတော့ နာမည်ကို 3G Watchdog လို့ ပေးထားပေမယ့်လည်း 3G Connections တွေကို Data ကောက်တာထက်ပိုပြီး လုပ်နိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Roaming Data ကို ကောက်ခံနိုင်တဲ့ App တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
GlassWire ကတော့ သင်တရက်တရက်အသုံးပြုနေတဲ့ Mobile Data တွေကို လှပတဲ့ Graph နဲ့ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်နေ့မှာ သာမန်ထက်ပိုပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုဖြစ်လဲဆိုတာကို ချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
4. Data Usage Monitor
အခု Data Usage Monitor ကတော့ ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ Mobile Data Limit ကို သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးတော့ တစ်ရက်ကို Limit ပြည့်အောင် ဘယ်လောက်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို ချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App မှာနောက်ထပ် Feature တစ်ခုအနေနဲ့ Internet Speed တွေကိုပါ ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
5. Internet Speed Meter Lite
အခု App ကိုတော့ မသိတဲ့သူရှားမှာပါ။ ယခင်တုန်းက အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို သိအောင်ပဲ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Application ဟာ ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းနည်းပါးပေမယ့် တနေ့တာအသုံးစရိတ်တွေကို ပြန်လည်သိနိုင်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2018-02-11T10:55:22+06:30February 11th, 2018|Mobile Phones|
Samsung Myanmar မှ A Series စမတျဖုနျးမြားအနကျ ဈေးနှုနျးအသကျသာဆုံးသော Galaxy A03 Core စမတျဖုနျးအား စတငျမိတျဆကျ
Snapdragon 8+ Gen 1 နဲ့ Leica လကျစှမျးပွ ကငျမရာတှပေါတဲ့ Xiaomi 12S Ultra
Redmi K50i 5G ကို မကွာခငျ ကွညောနိုငျ
Asus ROG Phone6ရဲ့ တရားဝငျ ဓါတျပုံတှေ ထှကျပျေါလာ
realme က GT Master Edition စမတျဖုနျး အလုံးရေ ၂ သနျး ရောငျးခထြားနိုငျပွီ
vivo သညျ FIFA World Cup Qatar 2022™ ၏ တရားဝငျစမတျဖုနျး စပှနျဆာဖွဈကွောငျး ကွညောခဲ့သညျ
သသေပျသောဒီဇိုငျးနှငျ့ ‌လှပသောပုံရိပျမြားကိုဖနျတီးပေးနိုငျသညျ့ HUAWEI nova Y90 အားမွနျမာနိုငျငံတှငျမိတျဆကျ
Samsung Galaxy M11 အတှကျ Android 12 အခွပွေု One UI 4.1 ရပွီ
OPPO Reno 8 Pro ကို FCC မှာ တှလေ့ာရပွီ
မလေတှငျး ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ စမတျဖုနျးရောငျးခမြှုဟာ ၉၆ သနျးအထိ ကဆြငျးခဲ့
Xiaomi Black Shark 5S Series ရဲ့ Specs တှေ ပေါကျကွားလာ
Snapdragon 8+ Gen 1 နဲ့ iQOO 10 Pro ကို TENAA မှာတှပွေီ့
အရှယျကွီး မကျြနှာပွငျ ပါလာတဲ့ Xiaomi Mi Band7Pro ကို ကွညော